Maxay farta dhakhaatiirtu u Tahay mid Qoraakeeda aan La Fahmayn - Daryeel Magazine
Maxay farta dhakhaatiirtu u Tahay mid Qoraakeeda aan La Fahmayn
Farta ay qoraan dhakhaatiirtu waxay mudo ahayd mid aan si wacan loo fahmi karin taasoo markaad aragto kuula muuqanaysa warqad uu qof ku feegaaray oo kale waxa aynu aragnaa xarriijimo isku darsamaya macnahooda iyo meesha kalmadu ka bilaabanayso iyo halka ay ku dhamaanayso.
Foolxumada Farta Dhakhaatiirta:
Dhakhaatiirta waa dadka ugu wax qorista badan caalamka, daawo kaliya ma qoraan oo wax kasto ay sameeyaan waa inay qoraal ahaan u reebaan, marka qorista oo badan awgeed iyo howsha sugayso iyo dedegta la rabo inu u qabto, waxay dantu ku qasabtaa inuu fududeesto qorista farta, isagoo ku badalayo xarfaha qaar xariiqin ama jiidis, waana sida badanaa ka muuqato warqadaha daawooyinka lagu qoro.
Hadaba kalkaan hoose ka daawo muuqaalka Ustaad Hussein Kurdi oo arrintaan si fiican u sharraxaya:
Maxay Yihiin Vitamins-ka Aan U Baahanahay? Waa Maxay Is-Hormarin Qofeed? Maxayse Tahay Muhiimadda Ay Leedahay? Calaamado Cadayn u ah in aad tahay Qof aan Go’aan Gaari Karin Maxay Tahay Sababta Nebi Maxamed U Doorbiday In Lagu Afuro Timir?